Kulankii Jaaliyadda Reer Oslo, Norway iyo R/wasaare C/weli | Calanka Somalia
← Ciidamadda Dowladda Kenya oo lagu dhawaaqay xilliga rasmiga ah ee ay ka mid noqonayaan Ciidamadda Amisom
Danjire Mahiga oo sheegay in koox aan waxba dhaamin Al-shabaab ay afgembi ku qabsatay xarunta madaxtooyada Somalia →
Kulankii Jaaliyadda Reer Oslo, Norway iyo R/wasaare C/weli
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo maalmahan ku sugnaa Oslo oo uu halkaas ku joogey booqasho rasmi ah ayaa Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway u qabteen xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay.
Xafladan ayaa waxaa ka soo qeybgalay dad gaarayey kun qof oo ka kala yimid caasimadda Oslo iyo magaalooyinka u dhow-dhow. Jaaliyadda Norway ayaa ahaa kuwo si fiican oo heer sare ah u abaabulan sameystayna guddi Soomaali oo dhan ka kooban.
DAAWO KULANKA XAFLADDA:
Xafladan ayaa waxaa ka hadlay qeybaha kala duwan ee Jaaliyadda sida dumarka, dhalinyarada, oday dhaqameedyada, culumaa’udiinka, aqoonyahanada iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan Norway gaar ahaan Oslo.
Afhayeenka gudiga qanabqaabada oo ku hadlayay magaca gudiga iyo kan Soomaalida ku Nool Norway, Mudane , Cabdiwahaab Maxammed Siciid ayaa u mahadnaqay gudigii uu ka midka ahaa ee ka danbeeyey qabanqaabada soo dhoweynta Raisal Wasaaraha iyo wefdigiisa.
Sidoo kalena wuxuu u mahad ceshey soomaalidii ka soo qayb gashay kulanka loogu talagalay in lagu soo dhoweeyo Raisal Wasaaraha iyo wefdigiisa.
Afhayeenku hadaladiisii uu kula dardaarmay Raisal Wasaaraha iyo shacabka Norway waxaa kamid ahaa ‘’ Dowlada waxaan ku leeyahay, soomalidu waxay soo martay 21 sano oo halaag iyo hoog ah , cudur, gaajo iyo jahli ah , qax iyo rafaad ah, kuwaasoo udiidey in ay nastaan oo ay noolaadaan.
Waxaa la idiinkaga baahanyahay adkaysi iyo dulqaad badan si loo gaaro wadooyinka wanaagsan ee aad u xariiqdeen geedi socodka nabada iyo dib usoo nooleynta wadankeenii burburay ee Soomaaliya.
Soomaaliya maanta samatabixin bay ubaahantahay, sida inta badan ay qabtana, ragii samatabixin lahaa ka kow ayaad tahay mudane Raisal Wasaare.Waxaan kugu dhiiri gelinaynaa oo aan kugula talinaynaa in aad xooga saarto tooshna ku raadiso dad soomaaliyeed oo kula samatabixiya wadanka soomaaliya, waa in la raadshaa dad leh sifooyinka:
Dal iyo dad jacayl , Howl karnimo wadata masuulnimo iyo garasho aqooneed, daacadnimo iyo hufnaan oo aysan ka marnayn alle ka cabsi iyo bini’aadnimo’’.
Soomaalida Norway waxa uu kula dardaarmay in ay midoobaan gacmahana is qabsadaan iyadoo laga gudbayo qabiil iyo wixii wadankii Soomaaliya buburkiisii u sababta ahaa. Wuxuu kaloo yiri, hadii aan midowno , nafteenana waxbaan u qaban karnaa sidoo kalena Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa xafladda goob joog ahaa qunsulka Soomaaliya u fadhiya Norway Yuusuf Bergen.
Qunsulka Soomaaliya u fadhiya Norway Yuusuf Bergen.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa khudbad dheer halkaas ka jeediyey oo taabaneysey horumarka Dowladda, xaaladda dalku ku suganyahay, mustaqbalka dalka, Jaaliyadda Norway iyo waxa laga rabo iyo dar-daaran ku wajahan Qurbo Joogta Soomaaliyeed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa bilad sharaf lagu gudoonsiiyey xafladda. Waxaa ka hadlay xafladda Ra’iisul Wasaare Ku xigeenka Ahna Wasiirka Ganacsida iyo Safiirka Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya iyo Ku Xigeenka Agaasimaha Guud ee Wasaarada Arrimaha Dibedda ee Norway iyo Ubah Cabduqaadir oo ka mid ah Xildhibaanada Deegaanka ee Oslo , waxaa kaloo shirib Cajiib ah halkaasi ka qaaday Xuseen Madoobe oo isaguna ah nin aad ugu caan ah suugaanta Shiribka. Waxaana xafladda xiriirinayey Baashe oo isna ah Xildhibaan ka tirsan Golaha Deegaanka ee magaalada Oslo.
Ra’isulwasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane C/weli Maxamed Cali oo Xafladda ka jeediyey khudbad dheer ayaa ugu horeyn Jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway uga mahad celiyey sida ay usoo agaasimeen xafladan qiimaha badan waxaana uu Ra’isulwasaare C/weli faah faahin ka bixiyey waxqabadka Dowladda iyo waxyaabaha waqtigan qorshaha u ah.
Ra’isulwasaare C/weli waxa uu dhanka kale ka hadlay Midnimada Umadda Soomaaliyeed waxaana uu tilmaamay in Midnimada Umadda ay tahay muqadas islamarkaana Soomaali meel walba oo ay joogto looga baahan yahay inay ilaashadaan islamarkaana isku duubnaadaan aysanna ogolaan in lakala qeybiyo.
Mudane C/weli Maxamed Cali ayaa sidoo kale ka hadlay waqtiga KMG ee Dowladda oo ku eg bisha August 20keeda sanadkan aynu jirno ee 2012 waxaana uu tilmaamay inay lagama maarmaan tahay in laga gudbo KMG nimada wadadii looga gudbi lahaana ay hada Dowladdu heysto taasi oo ah hirgelinta Road-Mapka.
Ugu dambeyn waxa uu Ra’isulwasaare C/weli Maxamed Cali baaq u jeediyey guud ahaanba Jaaliyadaha Soomaaliyeed waxaana uu ugu baaqay iney ka qeybqaataan dib u dhiska dalkooda islamarkaana loo baahanyahay in dadka aqoonta leh ee dibadaha wax ku bartay ay umadooda ugu adeegaan waxa ay barteen.
Posted on March 1, 2012, in Moment Research & Consultancy. Bookmark the permalink.	Leave a comment.